Dadka magangelyo-doonka waxa ku adkaanaysa inay bixiyaan kharashyadooda - Migrationsverket
Dadka magangelyo-doonka waxa ku adkaanaysa inay bixiyaan kharashyadooda
Svårare för asylsökande att betala sina räkningar – somaliska
Sannadka 2019 waxa inta badan la xiridoonaa meelaha adeegyada ee ay dadku ka bixiyaan lacagaha kharashyadooda (betaltjänstombud). Taas macnaheedu waxa weeye waxay markaa ku adkaanaysaa qofka magangelyo-doonka ah inuu bixiyo kharashyadiisa. Sidaa daraadeed marka aad codsanayso daryeel caafimaadka waa muhiim inaad waydiiso takhtarka ku daawaynaya (vårdgivare) sida aad u bixinayso lacagta kharashka marka aad takhtarka booqanayso.
Maanta waxa wadanka ku yaala 370 meelood oo meelaha adeegyada ee laga bixiyo kharashyaada (betaltjänstombud). Sannadkaa gudiyiisa waxa la xiridoonaa 200 oo ka mid ah, kuwa soo harayna waxay inta badan ku yaalaan maagaalooyinka waaweyn. Taasi waxay saamayn ku yeelanaysaa dadka magangelyo-doonka ah kuwaas oo bixinaya kharashyada ay tusaale ahaan ka mid yihiin, kharashka takhtarka, ee uu qofku ku bixinayo meelaha adeegyada ee kharashyada laga bixiyo (betaltjänstombud).
Takhaatiirta iyo meelaha rugaha caafimaadyada ee wadanka dhammaantii ku yaalaa waxay ka kala tirsan yihiin maamul goboleedyo caafimaad oo kala duwan. Midwaliba gobol ayey ka tirsan tahay waxaanay ku xiran tahay maagaalada aad adigu deggen tahay. Maadaama dhammaan gobol caafimeedyada (landstinget) oo dhami ay iyagu go’aanka iska leeyihiin sida ay rabaan inay dadka ay daaweynayaan lacagta u bixiyaan habka lacagta loo bixinayaa wuu kala duwaandoonaa iyada oo ay ku xiran tahay meesha aad adigu deggen tahay. Gobolada qaarkood waxaad lacagta ku bixindoontaa kaar ama lacagta oo kaasha ayaad siinaysaa markaad booqanayso. Gobolada qaarkoodna warqad aad lacagta ku bixiso ayaa guriga laguugu soo diridoonaa (faktora). Sidaa awgeed waxaad ku khasban tahay inaad tallo waydiisato sida aad lacagta ku bixinayso marka aad takhaatiirta booqanayso.
Waxaad kaloo soo wacikartaa takhaatiirta iyo meela rugaha caafimaadka inta aanad u tegin sida aad lacagta ku bixinayso. Haddii uu markaa takhtarku oggol yahay inuu bixiyo warqada lacagta lagu bixiyo (fakturabetalning) oo keliya waxaad waydiinaysaa inaad ku laabato oo aad lacagta iyaga gacanta uga dhiibto. Hey’adda laanta socdaalku kaama caawinayso adiga sida aad u bixinayso kharashyadaada.